Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.25 milyan shan degmo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.25 milyan shan degmo
Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.25 milyan shan degmo
Waxaa laga yaabaa 18, 2018
Deeqaha iyo amaahda dulsaarku waxay taageeraan horumarka dhaqaalaha si loo xoojiyo bulshooyinka ku nool gobollada Adams, Grant, Mason, Skamania iyo Walla Walla.
OLYMPIA, Wash - Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu ansaxiyay $ 2.25 milyan oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka magaalooyinka Othello, Stevenson iyo College Place iyo dekedaha Moses Lake, Boqortooyada Boqortooyada iyo Shelton.
"Mashaariicda CERB waxay matalayaan iskaashi muhiim ah oo udhaxeeya gobolka iyo bulshada maxalliga ah taasoo dhalisay xoojin dhaqaale," ayuu yiri Gudoomiyaha CERB Randy Hayden. "Guddigu wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo mid kasta oo ka mid ah jaaliyaddan si looga caawiyo qorsheynta horumarinta dhaqaalaha mustaqbalka."
Degmada Adams - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Othello ee loogu talagalay Qorsheynta Suurtagalnimada Daaweynta Biyaha Warshadaha. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu sahaminayo suurtagalnimada daaweynta biyaha wasakhda ah ee lagu daaweynayo aragtida waaritaanka biyaha magaalada, oo ay ku jiraan adeegsiga kaladuwan ee dheecaanka, beddelka daaweynta si loo gaaro isticmaalka la saadaaliyay, qiimaha daaweynta kale, xaaladaha maalgelinta iyo shuruudaha sharciyeynta Sanduuqa CERB waxaa la barbar dhigay $ 41,000 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Grant - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Muuse Lake loogu talagalay Daraasadda Suurtagalnimada Beerta Warshadaha. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu qiimeynayo fikrad fikradeed oo dhan 2,086-acre oo ku taal dhinaca galbeed ee garoonka diyaaradaha dekedda. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Grant - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Boqortooyada Boqortooyada loogu talagalay Horumarinta Dhulka Qorshaha Beerta Warshadaha. Kani waa qorshe guud oo loogu talagalay 400 hektar oo ku dhow beerta warshadaha. Qorshaha waxaa ku jiri doona kala soocida dhulka qoyan; Qorshe dhaadheer ama goob lagu xirayo - go'aaminta meesha ay ku yaalliin waddooyinka, khadadka biyaha, khadka korontada iyo xawaaraha tareennada; SEPA / NEPA; iyo daraasad suurtagal ah oo lagu sameeyo warshad lagu daweeyo biyaha wasakhda ah. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Mason - $ 1.5 milyan oo deyn ah iyo $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Shelton loogu talagalay mashruuca Ballaarinta Dhismaha Alaabada Kaymaha. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay dhisme bakhaar dhismihiisu yahay 30,000-fiit oo laba jibbaaran, oo ay ku jiraan hagaajinta biyaha duufaanka, hagaajinta waaweyn ee korantada, iyo nidaamka daminta dabka. Lammaanaha gaarka loo leeyahay ee ballanqaadka leh, Belco Forest Products, wuxuu maal-gelin doonaa $ 750,000, isaga oo hayn doona 30 shaqo oo abuuri doona 38 shaqo mashruucan. Lacagta CERB waxaa la jaanqaaday $ 500,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Skamania - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Stevenson ee loogu talagalay Daraasadda Xarunta Cilmi-baarista ee 'Stevenson Snakebite Study'. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo hanaan dhammaystiran, muddo-dheer ah oo lagu xallinayo la'aanta awoodda biyaha-wasakh ee magaalada. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Walla Walla - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Kulliyadda loogu talagalay Daraasada Qorsheynta Meeleynta Koonfurta Koolejka. Tani waa daraasad suurtagal ah si loo go'aamiyo haddii warshadda fudud (soosaarida cuntada ama soosaarka khamriga) ay noqon doonto mid ku habboon isticmaalka in ka badan 60 hektar oo dhul ah oo u dhow SR 125 oo ka socda Meadowbrook Drive ilaa Old Milton Highway. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Siideynta lacagaha CERB ee mashaariicdan waxay kuxirantahay codsade kasta oo dhameystira shuruudaha qandaraaska kahor oo ay kamid yihiin dhameystirka ilaha kale ee maalgalinta iyo helitaanka rukhsadaha lagama maarmaanka ah.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiyadeed ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyin waaxyo gaar loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. CERB waxaa ka shaqeeya Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington.
← Iskaashi la leh Norway xagga badda ee waarta Guddoomiyaha Dooro Washington NMA Council, alaab-qeybiyeyaasha aerospace ayaa ku shiraya Degmada Pierce si ay u sii wadaan shaqada fursadda cusub ee diyaaradda →